Madaxweynaha Somaliland oo magacaabay guddoomiyaal – Radio Daljir
Madaxweynaha Somaliland oo magacaabay guddoomiyaal
Juunyo 29, 2020 11:07 b 0
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtooyin madaxweyne oo summadoodu kala tahay JSL/XM/XKQ/222/1-530/062020 iyo JSL/XM/WM/222-531/062020, uu xilalkii kaga qaaday kuwa kalena ugu magacaabay gudoomiyeyaasha Gobolada qaar ka mid ah, sidoo kalena uu ku sameeyey bedel.
Sida aad la socotaan, xilka waxay dabcigiisa tahay in uu meerto noqdo, oo hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed, waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hore u hayseen. Waxaan idiinka mahad-celinayaa muddadii aad hayseen xilalka.
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida oo xukuno riday
TALOKEEN: Talooyin ku saabsan Meeqamka Muqdisho (dhegayso)